Nnwale weebụsaịtị gafee ọdịda peeji nke | Martech Zone
Tuzdee, Machị 6, 2012 Douglas Karr
Anyị ebunyelarị a ọdịda peeji nke kacha mma omume infographic nke dọtara uche dị ukwuu. Ihe omuma a sitere na Monetate, Nnwale weebụsaịtị: Gafere n'ofe ọdịda peeji, na-ewe ya a notch… na-enye ntinye na ibe ndị ọzọ iji nwalee, ihe iji nwalee, ndị na-ege ntị iji nwalee, ịlele azịza na echiche mgbe ịzụrụ azịza nnwale.
Ndị ahịa maara ihe ghọtara uru ịnwale bara. N’oge dị mkpirikpi, nnwale websaịtị gbanwere site n’ịgbanwe agba nke bọtịnụ “nyefere” na ibe weebụ, iwulite ihe mgbagwoju anya, ọtụtụ mkpọsa ule na ebumnuche kasịnụ nke ịnyefe ahụmịhe na ntanetị na ndị ahịa. Ihe omuma anyi ohuru, Nnwale Ubochi: Gharia na Mpaghara Ibe, na-enye echiche maka inwale peeji ndi ozo tinyere ntuziaka maka ihe ikwesiri itule mgbe ichoro uzo nyocha.
Tags: ọdịda pagemonetatetestingule weebụ
Mee na Emela nke Oku Na-aga nke Ọma
Douglas, dị ka mgbe niile… ekele maka ịkekọrịta anyị infographic. Nwee ekele maka nkwado ma hụ ọrụ ị na-arụ n'anya.